Iphone 12 နဲ့ ဇနီးဖြစ်သူမွေးနေ့ အတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ဦးကျော်သူ – Cele Top Stars
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင်ကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီသရုပ်ဆောင် မင်းသား ကျာ်သူကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဟိုးအရင်ကတည်းက လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုချိန်မှာတော့ ပရဟိတအလုပ်တွေကိုသာ စွမ်းစွမ်းတမံ လုပ်ဆောင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ချစ်ဇနီး ဖြစ်တဲ့ရွှေဇီးကွက်ကလည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ပါရမီဖြည့်ရင်း ပရဟိတအလုပ်တွေကို လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ပါရမီဖြည့်ဘက် ဇနီးကောင်းတစ်ယောက်လို့ ဆိုရမှာပါ ။
ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ကတော့ ရွှေဇီးကွက်ရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးဖြစ်ပြီး နာရေးကူညီမှုအသင်းမှာပဲ မွေးနေ့ ၊ အသင်း နှစ် (၂၀) ပြည့် နှစ်ပတ်လည် နဲ့ ထွန်းကိုကိုအတွက် ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားလေးကို တရက်ထဲမှာပဲ စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကိတ်အတူတူ ခွဲခဲ့ကြပါတယ် ။ ဦးကျော်သူကတော့ ချစ်ဇနီးအတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်အနေနဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Iphone 12 ကို ပေးခဲ့ပြီး surprise လုပ်ချင်ပေမယ့် မကြိုက်မှာစိုးလို့ကြိုပြောခဲ့ရတယ်လို့ ဆယ်လီကမ္ဘာအင်တာဗျူးမှာဖြေဆိုခဲ့ပါတယ် ။
ရွှေဇီးကွက်ကတော့ နာရေးကူညီမှုအသင်းစတင်တည်ထောင်စဉ်ကတည်းက သေသေချာချာအသင်းကို မတည်ပြီး ပရဟိတအလုပ်တွေကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ တကယ်ကို လေးစားထိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လို့ဆိုရမှာပါ ။ Happy Birthday ပါ အန်တီရွှေဇီးကွက်ရေ မွေးနေ့မှစပြီး နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိ ပရဟိတအကျိုးတွေ သယ်ပိုးရင်း ချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်သွားနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်…. ။
Credit- (Cele Gabar)
ခဈြပရိသတျကွီးရေ ပွညျသူခဈြ အနုပညာရှငျကွီး တဈယောကျဖွဈတဲ့ အကယျဒမီသရုပျဆောငျ မငျးသား ကျြာသူကတော့ အနုပညာအလုပျတှကေို ဟိုးအရငျကတညျးက လုပျဆောငျခဲ့တာဖွဈပွီး အခုခြိနျမှာတော့ ပရဟိတအလုပျတှကေိုသာ စှမျးစှမျးတမံ လုပျဆောငျနတော ဖွဈပါတယျ ။ ခဈြဇနီး ဖွဈတဲ့ရှဇေီးကှကျကလညျး ခငျပှနျးဖွဈသူကို ပါရမီဖွညျ့ရငျး ပရဟိတအလုပျတှကေို လုပျဆောငျခဲ့တဲ့ ပါရမီဖွညျ့ဘကျ ဇနီးကောငျးတဈယောကျလို့ ဆိုရမှာပါ ။
ဇနျနဝါရီလ (၁) ရကျနကေ့တော့ ရှဇေီးကှကျရဲ့မှေးနရေ့ကျမွတျလေးဖွဈပွီး နာရေးကူညီမှုအသငျးမှာပဲ မှေးနေ့ ၊ အသငျး နှဈ (၂၀) ပွညျ့ နှဈပတျလညျ နဲ့ ထှနျးကိုကိုအတှကျ ဂုဏျပွုအခမျးအနားလေးကို တရကျထဲမှာပဲ စီစဉျခဲ့တာဖွဈပွီး ကိတျအတူတူ ခှဲခဲ့ကွပါတယျ ။ ဦးကြျောသူကတော့ ခဈြဇနီးအတှကျ မှေးနလေ့ကျဆောငျအနနေဲ့ နောကျဆုံးပျေါ Iphone 12 ကို ပေးခဲ့ပွီး surprise လုပျခငျြပမေယျ့ မကွိုကျမှာစိုးလို့ကွိုပွောခဲ့ရတယျလို့ ဆယျလီကမ်ဘာအငျတာဗြူးမှာဖွဆေိုခဲ့ပါတယျ ။
ရှဇေီးကှကျကတော့ နာရေးကူညီမှုအသငျးစတငျတညျထောငျစဉျကတညျးက သသေခြောခြာအသငျးကို မတညျပွီး ပရဟိတအလုပျတှကေိုလုပျဆောငျခဲ့တာဖွဈလို့ တကယျကို လေးစားထိုကျတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျလို့ဆိုရမှာပါ ။ Happy Birthday ပါ အနျတီရှဇေီးကှကျရေ မှေးနမှေ့စပွီး နောငျနှဈပေါငျးမြားစှာထိ ပရဟိတအကြိုးတှေ သယျပိုးရငျး ခဈြတဲ့မိသားစုနဲ့ ပြျောရှငျစှာနထေိုငျသှားနိုငျပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော…. ။
နှစ်သစ်အစမှာ အနုပညာညီအစ်ကိုတွေဖြစ်တဲ့ ကိုလူချောအဖွဲ့သားတွေနဲ့အတူ ရိုက်ကူးရေးတွေ လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့ ယုန်လေး